Guddoomiyaha Napoli: “Higuain waa Khaa’in, mana filayn in uu tir tiri doono wixii uu 3 sano dhisayay” – Gool FM
Guddoomiyaha Napoli: “Higuain waa Khaa’in, mana filayn in uu tir tiri doono wixii uu 3 sano dhisayay”
(Naples) 28 Luuliyo 2016 – Madaxweynaha kooxda Napoli ee Waddanka Talyaaniga Aurelio De Laurentiis ayaa si kulul u weeraray Weeraryahan Gonzalo Higuain oo ka soo tegay kooxdiisa kuna biiray kooxda ay xafiiltamaan ee Juventus ee ka dhisan magaalada Torino.
Higuain oo 3 sano la joogay Napoli ayaa si rasmi ah ugu biiray Juventus oo kula wareegtay 90 Milyan oo Euro, isla markaana u xirtay Funaanadda Lambarka 9’aad.
Wargeyska ‘Corriera dello Sport’ oo soo xiganayay De Laurentiis ayaa waxa uu yiri: “Wixii Higuain uu sameeyay waa Khiyaano, laakiin waxaan Higuain ka filayay dhaqan ka duwan kaa, marnaba ma filanaynin in uu tir tiri doono wixii Saddex sano uu soo dhisayay”.
“Waxa uu si toos ah noo dareensiiyay in aan raadsanno weeraryahan booskiisa beddela.” ayuu sii raaciyay.
Higuain oo Taariikh fiican ku lahaa kooxda Napoli, isla markaana xilli ciyaareedkii dhammaaday dhigay rikoodhkii gool dhalin ee ugu sarreeyay xilli ciyaareed Horyaalka Talyaaniga (36 gool) ayay taageerayaasha Napoli mar qura ka niyad jabeen, waxaana ay ku tilmaameen mid khaa’in ah oo hanti ka doorsaday.
DAAWO: Jesse Lingard oo baraya saaxiibadiis dabaal daga caanka ah ee "DAB"
Daawo: Fabregas oo kaarka cas loo taagay iyo qaladka uu galay